Somaliland: two journalists and protesters arrested in Laasaanood and two TV channels shut down – HRC Somaliland
The Special Representative of the Secretary-General visits Human Rights Centre
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ku baaqaysaa in la sii daayo 2 suxufi iyo dad mudaharaad loogu xidhay Sool iyo in xayiraadda laga qaado laba telefiishan
28kii May 2018 waxa lagu xidhay magaaladda Laascaanood ee gobolka Sool 57 qof oo ka qayb qaatay mudaharaad. Taliyaha Booliiska ee gobolka, Cabdirisaaq Maxamed Faarax, oo shir jaraa’id qabtay wuxuu sheegay inay ahaayeen ciyaal iyo dumar la soo marin habaabiyay oo dhagxaan tuurayay islamarkaan qas sameyey. Wuxuu xaqiijiyay in 75 qof la xidhay.
Sidoo kale farqadda 3aad ee qodobka 32aad ee dastuurku wuxuu dhigayaa in “saxaafadda iyo warbaahinta kale waxay ka mid yihiin xorriyaadka asaasiga ah ee ra’yi- dhiibashada, waxayna leeyihiin madax-bannaanidooda; way reebban tahay tallaabo kasta oo lagu cabudhinayo; hawshoodana xeer baa nidaaminaya.”
Inay sii dayso labada suxufi ee xidhan ee kala ah Cabdiraxmaan Kayse Maxamed iyo Maxamed Axmed Jaamac;
Inay xayiraadda ka qaado telefiishanada SBS iyo SOMnews ayna wixii cabasho ee jira u marto hanaan sharci;
Inay sii dayso dadkii lagu qab qabtay mudaharaadkii ka dhacay Laascaanood 28 kii May; iyo
Inay ka noqoto go’aanka lagu mamnuucayo in shirar jaraa’id iyo shirar aam ogolaansho haysan lagu qabto Sool.